खाना खाँदा गरिने गल्तिहरु जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ - ज्ञानविज्ञान
५.खाने बित्तिकै सुत्यो भने अनेक प्रकारका रोगहरु लाग्छन् । मोहीले पाचन क्रियालाई मजबुत बनाउने भएकाले खाना खाएपछि मोही खानु उत्तम हुन्छ । खानेबित्तिकै ध्यान गर्न, व्यायाम गर्न, शरीरमा तेल लगाउन हुँदैन ।
शाकाहारी हुनु मुटुका लागि फाइदाजनक छ । तर नियन्त्रित रूपमा माछा मासु खाएमा हानि हुँदैन । खसी, राँगो, बंगुरको मासुले कोलेस्टेरोल धेरै बढाउँछ । माछा र कुखुराको मासुले कम बढाउँछ ।
चिल्लो नराखी माछा र कुखुराको मासु पकाउने तरिका सिक्नुपर्छ । यस्तो खानाले हानि गर्दैन । माछामासु बिहान र दिउँसोको खानामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । बेलुकी माछा मासु नखानु नै उत्तम हुन्छ ।
Don't Miss it सावधान ! विभिन्न राेगकाे जाेखिम हुन्छ ३० वर्ष कटेका पुरूषहरूमा
Up Next हामीले कस्ताे बेलामा अनार खान हुदैन ? जान्नुहाेस्